फूटबलमा गणेशको दादागिरी अन्त्य – TajaNepal
Home /Blog/फूटबलमा गणेशको दादागिरी अन्त्य
खेलकुदMay 11, 2018
फूटबलमा गणेशको दादागिरी अन्त्य
काठमाडौं । नेपाली फूटबल खेलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनामी कमाएर पनि नेपालमा दादागिरी देखाउँदै आएको मण्डले समूहलाई यस पटक फूटबल खेलाडीहरूले परास्त गरेका छन् । जनताले राजनीतिक रुपमा भन्दा व्यवसायिक खेलाडीका रुपमा गणेश थापालाई लिने गर्थे । तर एएफसी र फिफाबाट प्राप्त गोल प्रोजेक्टको रु ६४ करोड आङ्खनो स्वार्थमा खर्च गर्दा आङ्खनै नेतृत्वको टीमसँग कुनै सल्लाह नगरी खर्च गरेको कारण गणेश थापा विश्व फूटबल संघको नजरमा भ्रष्टाचारी ठहरिए । अख्तियारमा परेको मुद्दा समेत तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई १ करोड ५० लाख घुस खुवाएर फाइल दबाउन लगाएका राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका कमल थापाको हैकम पनि अव काम लागेन । ५ वर्षदेखि थापाको हैकम विरुद्ध लडेका शेर्पा १६औं साधारण सभाबाट अध्यक्ष चुनिएका हुन् । एउटा दाजु नोपली सेनामा, एउटा दाजु राजावादी राप्रपाको नेता भएको नाताले भ्रष्टाचार गरे पनि गणेश थापा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाबाट सांसद बनाइए । गणेश थापाकै दादागिरीले यस अगाडि अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन हुन दिइएको थिएन । आङ्खनो टिम हार्ने भएपछि गणेशले आङ्खनै साला मणि कुँवरमार्फत् अदालतमा मुद्दा हाल्ने चुनाव रोक्ने खेती चलाएका थिए । न्यायाधिशहरूलाई किनेर मण्डले वकिलहरूमार्फत् आङ्खनो स्वार्थमा फैसला गराउन सफल गणेश थापा यस पटक भने सदाका लागि फूटबल संघबाट बाहिर पुगेका छन् । नेपालका फूटबल खेलाडीहरूलाई दास बनाउँदै आएका गणेश थापाप्रति फूटबल क्लबहरू आक्रोशित थिए ।
कर्मा छिरिङ शेर्पा गणेशको टिममा उपाध्यक्ष थिए । तर गणेशले कहिल्यै सामूहिक नेतृत्वको ख्याल गरेनन् । मणि कुँवरलाई कहिले कोषाध्यक्ष त कहिले महासचिव पदमा टीका लगाएर फूटबलको क्षेत्रमा दादागिरी चलाउँदा गणेशकै सहयोगमा म्याच फिक्सिङ पनि गरिएको रहस्य प्रहरीले खोलेको थियो । गणेश थापा अध्यक्ष भएकै बेला गोल प्रोजेक्टको रौनक नेपालमा थियो । व्यवासयिक खेलाडीका नाममा सरकारलाई नटेर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई टेरपुच्छर नलगाउने गणेश थापाको दादागिरी यसरी अन्त्य होला भन्ने थिएन । फूटबल क्लबहरूलाई फिफाको गोल प्रोजेक्टबाट प्राप्त रकमबाट मात्र होइन एन्फाले दिलाउने अनुदान समेत भेदभाव गरेर फूटबल संघमा पञ्चायती दादागिरी प्रदर्शन गर्न पछि नपरेको पाप यस पटक कुर्लेको हो । संकट पर्दा जो सँग साथ लियो त्यसकै खेदो खन्न सिपालु गणेश थापाको चरित्रले यो अवस्था आएको हो ।
कुनै बेला काँग्रेसको आक्रमणमा परेको एन्फामा गिता राना जस्ता शैक्षिक माफियालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फाको अध्यक्ष बनाउँदा नेपाली प्रेसको साथ पाएका गणेश थापाले लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि आङ्खनो चरित्र सुधार गरेनन् । उनको दादागिरी फिफा र एएफसीको समर्थनमा थियो । पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नै थापाको चरित्रको छानविन गरे । पैसा खाएर फिफा अध्यक्षको लागि भोट बेचेको छोराको नाममा एक लाख डलर लिएको रहस्य पनि छानविनक्रममा पत्ता लाग्यो । जनताले हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको नाममा भोटको व्यापार गर्न राजनीतिक धूर्त कमल थापाको पार्टीको नाम निसाना बाँकी राखेन । राष्ट्रिय राजनीतिबाट दाजु कमल थापा सोत्तर हुनु र फूटबलबाट गणेश थापाको ग्याङ खेदिनु एकै पटक भएको छ । यो संयोग होइन मण्डले हराउ अभियान हो ।
कर्माले ६३ मत पाएका मात्र छैनन् । सिंगो प्यानलनै विजय गराएका छन् । गणेशको सालो मणि कुँवर १२ भोटमा थान्को लाग्नु पर्नाको कारण गोल प्रोजेक्टको भ्रष्टाचार हो । सरकारले अख्तियारमा थन्किएको गणेशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोतल्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रधानमन्त्री खड्ग ओली आफू भने भ्रष्टाचार नगर्ने भनिरहेका छन् ।
१५ सदस्यीय एन्फाको केन्द्रीय समितिका चार उपाध्यक्ष र ११ सदस्य रहने विधान त व्यवस्था छ । यस पटक मण्डले दादागिरीका कारण गणेश थापाको बिउ पनि एन्फामा रहेन । काँग्रेसको राजनीतिमा आबद्ध भए पनि जनताको काम गर्ने सेवक जोसुकै पार्टीको होस् आङ्खनो साथ रहने बताउने कर्माको कामले फूटबलको गिरेको साख पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुँदैन फूटबल प्रेमीहरू प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
बारामा आँधीहुरीको बबन्डर
कहिले सुध्रिन्छ विमानस्थल ?
राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुट
काँग्रेसको कलह उत्कर्षतिर
५० आयोजनालाई स्रोत जुटाउने घोषणा
आर्थिक अपराधविरुद्ध सरकार सक्रिय
नेपाली अर्थतन्त्रमा कम्पन
आयल निगम सुधार्न समितिको थुप्रो